ग्राण्डीले घरघरमा पुगेर पिसिआर परी-क्षण गर्ने, स्वाँ’ब संकलनबापत् शुल्क ५ सय मात्र ! – Yuwa Aawaj
जेठ १८, २०७८ मंगलबार 292
काठमाडौं : ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालले घरघरमा पिसिआर परीक्षण गर्ने भएको छ । नयाँ भेरि’यन्टसहित दोस्रो च’रणको को’रोना स’ङ्क्रमण बढेसँगै पिसिआर प’रीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको अस्प’तालले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय अस्पतालले घरघरमा पुगेर बिरा’मीको स्वा’व सङ्कलन गर्न लागेको हो । अस्पतालका महाप्रबन्धक विकासमान सिंहले बिहान ८ बजेदेखि १० बजेसम्म बिरामीका घरघरमा पुगेर स्वाँ’व सङ्कलन गर्न लागिएको राससलाई जानकारी दिएका छन्।
उनले भने, ‘गत बुधबारदेखि पि’सिआर परीक्षण ल्याव सञ्चालनमा आएसँगै बिरा’मीको सहजताका लागि घरघरमा पुगेर स्वाँ’व सङ्कलन गर्न लागेको हौँ ।’ स्वाँव सङ्क’लनको रकम अनलाइनमार्फत भु’क्तानी गर्नमिल्ने व्यवस्थासमेत अस्पतालले गरेको छ ।
पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट भने इमेलमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाइएको जनाइएको छ । अस्पतालले पिसिआर परीक्ष’णका लागि रु एक हजार ५ सय शुल्क तोकेको छ ।
यस्तै, बिरामीको घरमा पुगेर स्वाँव लिएमा सेवा बापत थप ५ सय लाग्नेछ । सरकारले दुई हजारसम्म पि’सिआर परी’क्षणका लागि शुल्क तोकेपनि अस्पतालले सरकारले तोकेको दरभन्दा कम शुल्कमा परी’क्षण गर्न लागेको हो ।
सहुलियत दरमा पिसिआर परि’क्षण सेवा यही जेठ ३१ गतेसम्म प्रदान गर्ने र अस्पतालमा पिसिआर आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान ८ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म तथा शनिबार बिहान ८ बजेदेखि मध्यान्ह १२ बजेसम्म हुने जनाइएको छ ।
‘थर्मफिसर क्वान्ट स्टुडियो फाइभ’ नामक अत्याधुनिक मेसिनबाट एक पटकमा ९६ को स्वाव परीक्षण गर्न मिल्नेछ । परीक्षण प्रयोगशाला जडानसँगै अब बि’रामी, अस्पतालका डाक्टर तथा कर्मचारी पि’सिआर प’रीक्षणका लागि अन्य अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था जानुनपर्ने भएको छ ।
स्वाँव स’ङ्कलन गरेको ५ देखि ६ घण्टाभित्र बि’रामीको रिपोर्ट आइसक्ने अस्पतालले जनाएको छ । उक्त प्रयोगशालामा को’भिड बाहेक अन्य भाइ’रसको समेत परी’क्षण गर्न मिल्नेछ ।
आगामी दिनमा बि’रामीको चापअनुसार पि’सिआर परी’क्षण सेवा विस्तार गर्दै लैजाने सो अस्पतालले जनाएको छ ।वि.स. २०६९ सालमा स्थापना भएको ग्रा’ण्डीमा २०० भन्दा बढी श्ययामार्फत बिरा’मीको उप’चार हुँदै आएको छ ।
Prevसपना रोका मगर खानासहित बाटोमा ,पल शाह रिलको नभइ वास्तविक हिरो ,यसरी बाढ्दै खाना ,यशो भन्छिन् उनी । (हेर्नुस् भिडियो)